ရလဒ်အနေဖြင့် Istanbul ရထားလမ်းအတွက် 120 ယူနစ်များကို ၀ ယ်ယူရန်တင်ဒါခေါ်ယူမှုရလဒ်အနေဖြင့် - RayHaber
[14 / 10 / 2019] IETT သည်အသိဥာဏ်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ထိုင်ခုံများအားအဆင့်မြှင့်သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[14 / 10 / 2019] အဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သော Ankara Sivas YHT လိုင်း! ..	06 တူရကီ
[14 / 10 / 2019] Hyperloop ရထားကို 2040 မတိုင်မီအထိဖွင့်လှစ်ရမည်	1 အမေရိကတိုက်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ် 120 Piece Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များအဘို့အ Metro ရထားစနစ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
22 / 08 / 2017 Levent Ozen 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထူးသတင်းများ, လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
အဆိုပါစနစ်စီမံကိန်းများညွှန်ကြားမှု / 2017 JCC အရေအတွက်ကို Dudullu-ဘော့ Mahmutbey-Flat မြေအောက်ရထားလိုင်းရထားပို့ဆောင်ရေးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် 229012 အရေအတွက်မြေအောက် Tool ကိုထောက်ပံ့ရေးနှင့်ကော်မရှင်စီးပွားရေးနူးညံ့ 120 အပေါ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အားဖွငျ့ဖျြောအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရထား 31.07.2017 ထိုသို့သောအိုးအိမ်ကုမ္ပဏီများတင်ဒါ2အတွက်လေလံတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
RayHaberတင်ဒါများနှင့်သူတို့၏လေလံများ (TL) မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရအောက်ပါအတိုင်း -
Rotem ကုမ္ပဏီထံမှတစ်ဦးလျှင် 1-564.000.000
CRRCMNG နှုန်း 2-565.000.000
မက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်စီးရီးဖြန့်ဝေအချိန်ဇယား; တစ်လလျှင်အားလုံး 120 20 (နှစ်ဆယ်) ၏စုစုပေါင်းမော်တော်ယာဉ်ပေးပို့ပြီးစီးလိမ့်မည်။ အဆိုပါစစ်ခင်းကျင်း၏ပေးပို့အလုပ်နှင့် xnumx.ay 10 ့သည့် နေ့မှစ. စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလအကုန်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။
30 စုစုပေါင်းရုံးတင်စစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေး 60 (ခြောက်ဆယ်) ရက်, များအတွက်နောက်ဆုံးအညွှန်းကိန်း (သုံးဆယ်) ကာလ၏ပေးပို့ပြီးနောက်လယ်ကွင်း testing အတွက် 90 (ကိုးဆယ်) နေ့ကကာလကိုအသုံးပြုရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာပေးပို့အချိန်ဇယား, 10 ။2sequence ကိုလ (8 မော်တော်ယာဉ်), တစ်ဦးချင်းစီလ3ညီ (12 ယာဉ်များ) နှင့် 20 ပြီးနောက်။ အဆိုပါ 1 ခုနှစ်တွင် packets တွေကိုပုကန်ထရိုက်တာကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်လအတွက်ကိုအပ်ခံရဖို့ခြေရာခံ။ ဤအလိုအပ်ချက်များကို၏ကန်ထရိုက်တာများကပွညျ့စုံမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေး, ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်လိမ့်မယ်ဖုံးလွှမ်းယာဉ်များလိုင်းများအဘို့အသီးခြားစီပြုမိပါလိမ့်မည်။
မည်သည့်လိုင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်ပေးပို့ပင်လုပ်ကိုင်ဖို့နှင့်ဤအလုပ်၏နယ်ပယ်အတွင်းမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတောင်းဆိုဖို့လုံလောက်သောနံပါတ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရုံးတင်စစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေးများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့မော်တော်ယာဉ်များ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်အဆင်သင့်နှင့်အကြောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ; ဒါဟာကဆိုသည်မျဉ်းကြောင်းအစမ်းစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စစ်ဆင်ရေး၏စမ်းသပ်မှုကာလလိုင်းကလည်း, ယာဉ်ပို့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အထက်နှင့်လယ်ပြင်ကိုစမ်းသပ်ပေးပို့၏ပြီးစီးပြီးနောက်အသုံးပြုခံရဖို့ထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့် directory ကို 60 (ခြောက်ဆယ်) နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးစစ်ဆင်ရေးကာလ၌အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကန်ထရိုက်တာစမ်းသပ်ခြင်း (စက်ရုံနှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု) နှင့်စမ်းသပ်လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ရန်သဘောတူညီချက် 30 (သုံးဆယ်) ၏အင်အားစုသို့ entry ကိုအောက်ပါအသေးစိတ်အလုပ်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောအတည်ပြုချက်၏ပြက္ခဒိန်ရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှတင်သွင်းလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကန်ထရိုက်တာ; စာချုပ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်း, ထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ထုတ်လုပ်မှုပြင်ဆင်မှု, ထုတ်လုပ်မှု-စုဝေးစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကောက်ယူပါလိမ့်မည်အောက်ပါစီမံကိန်းအစီအစဉ်၏အုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်နိုင်ထုံးစံများကိုပါလိမ့်မယ်။ Mahmutbey-Flat ဟာ Metro လိုင်း 120 ကာလ၏တရားခွင်စစ်ဆင်ရေး၏ကြာချိန်, နှင့်မီထရိုလိုင်း Dudullu-ဘော့၏တရားခွင်စစ်ဆင်ရေး၏ကြာချိန် 60 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးယူနစ်ရှိနိုင်ပါ 80 tool ကို Mahmutbey-Flat မီထရိုလိုင်းမြေအောက်ရထား, မက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အခြားယူနစ်ကြွင်းသောအရာ 40 Bostanci-Dudullu မီထရိုလိုင်းများအတွက်စီစဉ်ထားကြသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စုစုပေါင်း 68 မက်ထရိုယာဉ်များ - Hacıosman - Yenikapı Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် tool ကိုနု (အထူးသတင်းများ) ၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိနိုင် 08 / 10 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ် BB ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်စီမံကိန်း 68 အပိုင်းပိုင်းမက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်ထောက်ပံ့ရေးနု၏လကျအောကျခံနေ့စွဲများအတွက်အောက်တိုဘာလ 08 2014 နောက်ဆုံးလေလံနောက်ဆုံးနေ့အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ Durmazlar: စာလုံး CNR ကျေးဇူးတင်ပါသည်: Tools များ 68 ယူရိုအကြွေးလေလံ3ယူရိုအာမခံပေးထားပါတယ် - "Hacıosman 83.216.989 ကုမ္ပဏီမှတင်ဒါ၏ Yenikapi ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် 67.986.400 အပိုင်းပိုင်းမက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ယူရိုလေလံအတွင်းတင်ဒါများအတွက်verdi.yaklaşıkကုန်ကျစရိတ် 90.800.000 တရားမဝင်လေလံဖြစ်ကြောင်းကမ်းလှမ်း 7% ပရီမီယံ eurob ပို့ကုန်ချေးငွေအတိုးနှုန်း% နှစ်စဉ်တင်ပို့မှုခရက်ဒစ်2135+ နေသည်စက်မှုအကြွေး Native နှစ်ပေါင်းများစွာ: 40% Hyundai-Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ: Tools များ xnumxeuro အကြွေးကမ်းလှမ်း ...
တဲလ်အဗစ်မြို့တော် Mass Transit စနစ် (NTA) 120 ပမာဏအလင်းရထားယာဉ်ဝယ်ယူ (optional ကို 30) တွေ့သည့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါရန် | ယာဉ်၏တဲလ်အဗစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 12 / 11 / 2012 တဲလ်အဗစ်ယာဉ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတဲလ်အဗစ်မြို့တော် Mass Transit စနစ် (NTA) 8 2012 system ကိုလိုင်းပေါ်မွို့၌ 120 နိုဝင်ဘာလအလင်းရထားလမ်းမှ (30 ရွေးချယ်နိုင်) စုစုပေါင်းအလင်းရထားဟာ System tool ကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့သတိထားမိဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမှာတည်ရှိပါတယ်တဲလ်အဗစ်မြို့တော် Mass Transit စနစ် (NTA) တွင်ဒီဇင်ဘာနေ့တိုင်အောင်လေလံ 30 ။ အဆိုပါတင်ဒါဇန်နဝါရီလ 10 2013 ta နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးဧပြီလ 10 2013 အပေါ်ပေးထားပါလိမ့်မည်။ Xnumxkmlik လည်းအနီရောင်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအပြည့်အဝလွှဲ၌ရှိ၏ Bat ယမ်း Petakh အလင်းရထားလမ်းမှ 2017-Tikva အတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အသစ်သောကားများ၏ဤလိုင်းပေါ် ...
KAYSERAY ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) 14 / 04 / 2014 KAYSERAY ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ: Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာန, 30 အပိုမြို့ပြရထားလမ်းအကူးအပြောင်းစနစ်ကမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရေးနူးညံ့ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။4ကုမ္ပဏီများတင်ဒါပါဝင်ခဲ့။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 မှာ 17532 / 14 အမှတ် xnumx.nisan.xnumx နူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကို: 2014 လေလံအတွက်စုဆောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကုမ္ပဏီနှင့်ယူနစ်ကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအရဟုတင်ဒါတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Get အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏: Bozanaka မှ: 14 ယူရို Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ: 00 ယူရို Durmazlar: 44.000.000 ယူရို Skoda: အယူရိုဆွဲဆောင်မှုများအကဲဖြတ်ပြီးနောက် 49.290.000 နု၏တရားဝင်ရလဒ်အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်လိမ့်မည်။
ကျောက်ခေတ်-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးစနစ်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုနူးညံ့သောရလာဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက် 05 / 08 / 2015 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် 300 မက်ထရိုမြေအောက်ရထားများထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဥရောပဘေးထွက်ရထားလမ်းညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ Istanbul Metro မြူနီစီပယ်ရထားလမ်းစနစ် ဦး စီးဌာန၊ ။ Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် 75 နံပါတ် (4 မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်) မက်ထရိုစီးရီး၊ စုစုပေါင်း 300 မက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်များဝယ်ယူရေးတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကို 04.08.2015 - Istanbul မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်မြေမြို့တော်ထပ်မံဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အအုံရှိ 11 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ။RayHaberအားဖြင့်လက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်အရ; တင်ဒါ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 355.000.000 EURO ဖြစ်သည်။ တင်ဒါသူများနှင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းများ (EURO) ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
စုစုပေါင်း 68 မက်ထရိုယာဉ်များ - Hacıosman - Yenikapı Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် tool ကိုနု (အထူးသတင်းများ) ၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိနိုင်
တဲလ်အဗစ်မြို့တော် Mass Transit စနစ် (NTA) 120 ပမာဏအလင်းရထားယာဉ်ဝယ်ယူ (optional ကို 30) တွေ့သည့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါရန် | ယာဉ်၏တဲလ်အဗစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ကျောက်ခေတ်-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးစနစ်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုနူးညံ့သောရလာဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (226) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)